Abavelisi bangaphandle, abaNikezeli-fektri base China ngaphandle
Intwasahlobo yowe-2020 izihlangu ezitsha zabasetyhini ngombala ohambelana nomntu ...
Umgangatho ophucukileyo wokuphefumla i-insole yerabha ethambileyo ...
Ihlobo lehlobo elitsha lamaNqaku aBantu abaNtsha eLace-Up Microfiber Leath ...
Izihlangu ezibonakala zilula ezihlekayo eziqhelekileyo zamadoda i-lig ...
Amaseke aLahlekile aMadoda njengeZhlangu, Amadoda anokuphefumla ...
Kutshanje intaba eziphakamileyo ezinqamlezelwe ngaphandle kumdlalo wamadoda wokuhamba intaba ...
Izicatshulwa zemidlalo ezinamaxabiso aphantsi ezibaleka izicathulo zasendle ...
I-Amazon ephezulu umthengisi wesiko lamadoda amhlophe izicathulo ze-sneaker pri ...
umzi-mveliso wokuthengisa izihlangu ezikhulu, abathengisi abashushu abatsha, izihlangu zezemidlalo amadoda
Zilungiselele usuku oluzaliswe lulonwabo kwitreyini kwisihlangu esikhwela intaba! Isikhumba esinefaux kunye ne-mesh ephezulu. Ukuvalwa kweLace-up. Ukukhusela irabhi yinzwane. Isithende sokudonsa ilokhwe. Ulwimi oluxhonyiweyo kunye nekhola. Umnxeba ophefumlelweyo ophefumlelweyo unika imvakalelo yokungena izihlangu. I-EVA midsole ibonelela ngentuthuzelo ezinzileyo. I-Rubber Outole ihambisa ukuqina okuphezulu kokusebenza, uzinzo, kunye nokunyanzelwa kweMveliso yoLwazi yeMveliso Akukho.
Uyilo oluThembekileyo lweMidlalo yangaphandle yeZidalwa eziDala yaMadoda
Uyilo oluthembekileyo oluphezulu kunye nokubamba okuphezulu kwesitayile esihamba ngomkhondo kuya kuqinisekisa ukuba imozulu embi ayizukunciphisa izicwangciso zakho zokuhamba. Izicwangcisi zokuhamba intaba iphantsi ukuze zihambe kakuhle. I-mesh evaliweyo eqinileyo kunye neendlela ezigqunywe ngaphezulu. I-cap ye-synthetic yinzwane kunye nesithende sokhuseleko olongezelelweyo lwe-abrasion. Isitayile se-lace yendabuko yesitayile esithandwayo. Ilaphu elithandekayo elenzelwe intuthuzelo yangaphakathi. I-midsole ekhanyayo yokuthuthuzela okuhlala ixesha elide, ukugquma ngaphezulu, kunye nokubuya kwamandla. L ...
uyilo olutsha lokuhamba ngeengubo zelaphu ezinokuphefumla iifashoni zokuhamba iintambo zamadoda
Izihlangu zokuhamba intaba ziqinisekisa ukuba uhlala uqinile kwaye uzithembile ezinyaweni zakho imini yonke ngelixa uqhubeka nokuhamba kwezo ndlela. Iilokhwe ezincinci zokukhanya zokuhamba zenziwe ngendwangu kunye ne-pu ephezulu. Ukufakwa kwilindle lokunxiba okunokuphefumla. Uxinzelelo oluxinanoxekileyo oluxineneyo lubumbano lwe-EVA yangaphakathi lenzelwe ukubonelela ngokuchaseneyo ngakumbi nokuxinana nokuhlala ixesha elide nenkxaso. I-anatomical high-rebound footbed yokuthuthuzela yonke imini. Irabha ekhethekileyo ibonelela ngetrippy traction. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5051 Pro ...
Ukufika okutsha kwe-US 12 Kwenziwe intwasahlobo e-China
Khusela i-adventurer yakho phezulu-okanye-ezantsi enduli kwisihlangu esithembekileyo sokuhamba. Isicangu esizinzileyo, esiphakathi kwiprofayile senziwe ngeepaneli zephefumlo ezinokuphefumla kunye nokugquma okuthe gqolo. Uyilo olungeenxa zonke lwezinzwane lubonisa ukuvalwa kweLace-up, i-collar ethambileyo yentsimbi, isithende esitsala kunye nesithende sokuzikhusela. Ifaka i-EVA yonyawo egudileyo kunye ne-exole egudileyo yeendlela ezininzi ukuze siboleke okona kulungileyo. Inqaku loLwazi lweMveliso Inombolo: 5050 Igama lomkhiqizo: iphakathi eliphakathi elineentambo ezithandwayo
Kutshanje, iintaba zangaphandle eziphakamileyo zineentaba ezihamba zodwa
I-boot iya kukugcina ukhuselekile ngelixa unyuka intaba okanye usebenza kwindawo enkulu yangaphandle ngentuthuzelo kunye nokuhlala ixesha elide ngaphandle. I-Camouflage nylon mesh kunye ne-synt synt pu ephezulu. I-boot enephrofayili ephezulu inikezela ukhuseleko olongeziweyo lwe-ankle. Ilaphu elithandekayo elenzelwe intuthuzelo yangaphakathi. Inkqubo yokuqhawula ngokwesiko ukuze ikhuseleke ngakumbi. Ukukhanya okuncinci, i-fork shank eqinileyo iqinisekisa ukuguquguquka kunye nokuqina. I-Midsole ephezulu-ye-rebound ifumana ifuthe lokufunxa okumangalisayo kunye nokukhupha iinyawo zakho ...
I-2020 I-Classic Outdoor ye-Mesh eChasayo yeHiking Sport izicathulo zamadoda nabafazi
Ezi zihlangu ziqhayisa ngesibane esomeleleyo kodwa esomeleleyo esinezinto eziphezulu ezilungele ukuthatha zonke iintlobo zomhlaba. Izicwangcisi zeenqanawa ezinomgaqo ophantsi zenziwe nge-mesh yokusebenza ephezulu. Ukuvalwa kweLace phezulu ukuze kwenziwe uhlengahlengiso olukhawulezileyo kunye nesitayile esikhuselekileyo. Ukukhusela iinzwane. I-Mid-density ye-EVA midsole yokuqina kokuhlala phantsi kweenyawo kunye nokufakwa emzimbeni. I-Rubber Outole ibonelela ngethayile ehlala ihleli. Inqaku loLwazi lweMveliso Nomb.
Izitshisi eziShushu zaseAmazon eziGijimayo ziMidlalo zaBesilisa eziNgaphandle zoMyili
Isihlangu sokuhamba intaba sikuvumela ukuba ukonwabele umzuzwana ngamnye kuloliwe kunye nolwakhiwo lwayo lokulungela imozulu, inkxaso yangaphantsi kweenyawo, kunye nokubambelela okuthembekileyo. Isikhumba esenziwe ngesikhumba kunye ne-mesh ephezulu. Ulwimi oluxhonyiweyo kunye nekhola. Ukukhuselwa koonogada kukhuselwa ematyeni nakwimigqomo yendlela. Inkqubo yemveli ye-lace-up yesuti ekhuselekileyo. Isithende sokudonsa ithebhu. Umnxeba ophefumlayo wokuphefumla. Ukukhupha i-insole ekhutshiweyo inika inkxaso eguqukayo kunye nentuthuzelo yaphantsi. Uxinzelelo lwe-EVA yangaphakathi koxinzelelo lokuzinza kunye nentuthuzelo. I-GRIP outsole ibonelela ngohambo olomeleleyo ...
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu okanye ipricelist, nceda ushiye kuthi kwaye siza kube sinxibelelana kwiiyure ezingama-24.
Idilesi:No. 618 Chonghong Street, Quanzhou kwezoQoqsho kunye noMmandla woPhuculo lweTekhnoloji, kwiPhondo leFujian.